“Anigaa ka wanaagsanaa Neymar, Messi iyo Ronaldo!” – Gool FM
“Anigaa ka wanaagsanaa Neymar, Messi iyo Ronaldo!”
Haaruun May 16, 2020
(Brazil) 16 Maaajo 2020. Su’aal kama taagna in Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ay yihiin kuwii ugu wanaagsanaa ee xilligooda, iyadoo xitaa lagu doodi karo inay ku jiraan xiddigaha ugu maqaamka sarreeya kubadda cagta, si la mid Neymar Jr ayaa ah xiddig kale oo aad u sarreeya.
Markaa sheekadaas laga soo tago waxaa jira xiddigo hore u soo ciyaaray kubadda cagta, kuwaasoo aaminsan inay iyaga ka wanaagsanaayeen halyeeyada hadda garoonka ku jira.
Edilson oo ka mid ahaa xiddigii Brazil kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 2002 ayaa sheegay inuu ka wanaagsan yahay Neymar Jr, sidoo kalena uu ka sarreeyo Messi iyo Ronaldo marka ay timaaddo guulaha ay gaareen.
Ciyaaryahanka Brazil u saftay kaliya 21-ka kulan ayaa ku guuleystay afar horyaal intii uu u ciyaarayay kooxaha Palmeiras iyo Corinthians, waxaana uu aaminsan yahay in qaab ciyaareed ahaan uu ka wanaagsanaa xiddigaha hadda ugu awoodda badan ciyaarta kubadda cagta.
Edilson ayaa ku guuldarreystay in xitaa hal jeer uu u tartamo abaalmarinta ugu sarreysa kubadda cagta ee Ballon d’Or, tii oo ay jirto inuu waqti kooban ku qaatay qaaradda Yurub xilligaas oo uu amaah ugu ciyaarayay kooxda Benfica, balse waxa uu meel sare ka gaaray ciyaaraha heerka qaran.
Waxa uu qayb ka ahaa safkii Brazil ee sanadkii 2002 noqday horyaalka dunida, isagoo ka garab ciyaarayay Ronaldo Nazario, Ronaldinho iyo Rivaldo.
Messi iyo Ronaldo waxay gaareen guulo shaqsiyadeed oo taariikhi ah, inkastoo wali ay sugayaan koobka ugu weyn ee uu ciyaaryahan ku riyoodo oo ah Koobka Adduunka.
Weeraryahannada Barcelona iyo Juventus ayaa wadar ahaan heysta 11 jeer abaalmarinta Ballon d’Or, waxay sidoo kale cagaha la dul mareen rikoorro badan oo u yaallay shaqsiyaad kubadda cagta kaga horreeyay.
Edilson ayaa ku doodaya in ku guuleysiga Koobka Adduunka uu kaga wanaagsan yahay Messi iyo Ronaldo, kuwaasoo ka arrimiya kubadda cagta xilligan casriga ah.
Waxaa sidoo kale uu rumeysan yahay in tayadiisa xirfadeed markii uu ku jiray xilligiisii ugu wacnaa uu kaga sarreeyo xiddiga xilligan Brazil ay ku tashaneyso ee Neymar Jr.
“Markii aan ku jiray waqtigeygii ugu fiicnaa, waxaan u ciyaarayay si ka fiican Neymar,” ayuu Edilson u sheegay TV-ga Bandeirantes. Waxaana hadalkiisa uu ku daray: “Wuxuu u baahan yahay inuu ku guuleysto Koobka Adduunka si uu iigaga fiicnaado.
“Waxaan leeyahay shaqsiyad, si Messi uu iigaga wanaagsanaado, waa inuu isna ku guuleystaa koobka Adduunka.
“Cristiano Ronaldo kaliya waa uu xoog badan yahay, kubaddana si fiican ayuu ugu darbeyn karaa labada lug, balse anigaa ka xirfad badan isaga.” ayuu yiri weeraryahankii hore ee xulka qaranka Brazil.
Edilson ayaa dhaliyay goolal kooban xirfaddiisa kubadda cagta, balse waxa uu lahaa hal abuur dhif dhif ah.
Waxa uu sameeyay kaliya lix isku day 21-ka kulan ee uu u saftay Brazil xilli loollan adag oo booskiisa ah uu la kulmayay.
Waxaa la xasuustaa Koobkii Adduunka ee 2002 ka dhacay Japan iyo South Korea in kaliya uu laba kulan ku soo billawday, waxayna kala ahaayeen kulammadii Costa Rica iyo Turkey, halka kursiga keydka uu kasoo kacay kulammadii England iyo China.
Intaas waxaa u sii dheer inuusan daqiiqadna ka ciyaari ciyaartii fiinaalka ee ay Brazil 2-0 kaga adkaatay Germany, balse waxa uu heystaa biladda Koobka Adduunka.
Ole’olaha Barcelona ay kusoo qaadaneyso Lautaro Martinez oo marxalad muhiim ah maraya
“Qolka labiska lagam rabin isaga!” Emery oo mar kale dhaleeceeyay Ozil